राज्यकोष – Himalaya Television
पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिनु कानूनविपरीतः नेता थापा
२६ असार २०७८ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि राज्य कोषबाट उपचार खर्च दिनु कानून विपरीत भएको बताउनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस नेता थापाले...
पशुपतिमा सुनको छानो हाल्न राज्यकोषबाट ३० करोड ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
२३ माघ २०७७ काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मूल मन्दिरमा रहेको शिवलिङ्गको जलहरी र छानोमा सुनको जलप लगाउने निर्णय गरेसँगै विभिन्न टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य कोषबाट ३० करोड रकम दिने घोषणा गरेसँगै...
अलपत्र नेपालीको उद्धारमा राज्यकोष उपयोगमा किन आनाकानी ?
११ भदौ, २०७७ काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई उद्धार गर्दा राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । सरकारी पैसामा उद्धार गर्दा विदेशमा रहेका सबै कामदार आउन खोज्ने र राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार...